November 2014 ~ brazesh
साइकल त चढ्ने, तर......
November 25, 2014 नेपाली, बायाँ फन्को-नेपालबाट No comments
नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित मेरो स्तम्भ बायाँ फन्को-१४४
केही समय अघिदेखि केही मानिसहरु काठमाण्डौमा साइकल चलाउने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न र त्यसको प्रचारप्रसार गर्न लागिपरेका छन् । सेनाप्रमुखले पनि हप्ताको एक दिन आफू साइकल चढेर कार्यालय जाने र अरुलाई पनि त्यसै गर्न निर्देशन दिएको कुराले एकताका निकै चर्चा पाएको थियो । त्यो क्रम सम्भभवत जहिले पनि कायमै होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । साइकल प्रति मानिसहरु जागरुक हुनु भनेको निश्चय नै पनि स्वागतयोग्य कुरा हो । किनभने साइकल चलाउनुका धेरै फाइदाहरु छन् ।
November 09, 2014 नेपाली, बायाँ फन्को-नेपालबाट No comments
नेपाल साप्ताहिकको स्तम्भ बायाँ फन्कोमा प्रकाशित तर स्थानाभावका कारण सम्पादित लेखको पूर्ण रुप ।
"सार्कको लागि हामी आम जनताले पनि केही योगदान गर्न पर्छ होला नि । हाम्रा कन्चटतिर फुलेका रौंहरुमा यो महान पर्वको लागि कालो लगाउनका लागि आफै रंग किन्ने कि सरकारी बजेटबाट सहयोग हुन्छ ?"
तपाईँहरुलाई लागिरहेको होला, म मान्छे खाने शार्कको कुरा गर्न लागेको छु । तर हैन, आज म मान्छेले खाने शार्कको कुरा गर्दैछु । यसमा भिन्नता के छ भने यसलाई शार्क हैन सार्क भनिन्छ ।
यो सार्कले आजकल हाम्रो ध्यान तानेको छ । हरेक जमघटमा छलफल, टीकाटिप्पणी र बहस हुने विषय हो यो सार्क । सार्क जतिजति नजीक आउँदैछ, राजधानीका ती प्रमुख बाटाघाटाहरुको दुलहीसिंगार द्रूत गतिमा हुन थालेको छ, जहाँजहाँ सार्कीहरुको आवागमन र चहलपहल हुन्छ । (सार्क राष्ट्रका हामी सबै सार्की हौं भन्ने स्व. जीवन अधिकारीको अभिव्यक्ति साभार)